के तपार्इ वराेजगार हुनुहुन्छ ? नेपाल प्रहरीले माग्यो आठ हजार थप दरबन्दी - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
के तपार्इ वराेजगार हुनुहुन्छ ? नेपाल प्रहरीले माग्यो आठ हजार थप दरबन्दी
२० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०९:३० June 3, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २० जेठ । नेपाल प्रहरीले सरकारसँग आठ हजार प्रहरी कर्मचारी थप दरबन्दी माग गरेको छ । मुलुकको प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रहरी युनिट आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप दरबन्दी माग गरेको हो ।
सोल–सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु
उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनको चीन भ्रमणका रोचक भिडियो र तस्विरहरु
इञ्जिनियर ढुङ्गानालाई नेकपाका कार्यकर्ताहरुले गरे कारवाही
९ वर्षदेखि वेपत्ता सुनकेशरी फर्केर अाएपछि परिवारमा खुसी
पेरिसडाँडाको जनयुद्ध दिवस छोडेर विष्ट, किराती र अाहुती विप्लव-बैद्यको कार्यक्रममा
ठूला प्रशारण लार्इन र जलविद्युत आयोजना बनाइदिने चीनको प्रस्ताव, प्रम ओलीलार्इ चिनले माग्यो प्रस्ताव
यस्तो खतरानाक तथ्याङ्क : राजधानी काठमाडौंमा हरेक महिना २० जनाको ब्रेनडेथ हुन थाल्यो